Duqeyntii Iiraan iyo saameynta Diyaaradaha – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Duqeyntii Iiraan iyo saameynta Diyaaradaha
Duqeyntii Iiraan iyo saameynta Diyaaradaha
Hay’adda Duulista Hawada ee Mareykanka ayaa ka horjoogsatay diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka inay duulaan ku hawada Ciraaq, Iran, biyaha gacanka cad, iyo Badda Oman, waxaana dhowr duullimaadyo rayid ah ay ku dhawaaqeen inay ka leexdeen wadooyinkooda duulimaad ee ka fog garoomadaas, waddammada qaarna ay ka daadgureeyeen muwaadiniintooda Ciraaq ama ay ka codsadeen inay taxaddaraan, kadib duqeyntii Iiraan ee lagu qaaday laba saldhig oo ay ku jiraan askar. Mareykan.
Waxay sheegtay inay ka mamnuucayso shirkadaha duullimaadyada rayidka ee Mareykanka inay duulimaad ka sameeyaan gobolka sababtuna tahay “dhaqdhaqaaqyada millatari ee la kordhiyay iyo xiisadda siyaasadeed ee ka sii dareysa Bariga Dhexe, taasoo khatar gelin karta howlaha duullimaadyada rayidka ee Mareykanka.”
Mamnuuciddan ka hor, wakaaladdu waxay horeyba u mamnuucday shirkadaha duullimaadyada Mareykanka inay ku duulan joog ka hooseeya 26,000 hawada Ciraaq, iyo inay duulaan qeyb ka mid ah hawada Iran ee ku teedsan gacanka Persian iyo badda Cumaan, kadib markii Iran ay duqeysay dayuuradaha sareeya ee Mareykanka bishii Juun / Bishii la soo dhaafay ee June.
Shirkadaha diyaaradaha ee ajnabiga ah iyo wakaaladooda sharciyeynta ee qaranku badanaa waxay tixgeliyaan ogaysiiska Mareykanka markay go’aaminayaan meelaha ay ka duulayaan.
Sidaas darteed, Diyaaradda Shiinaha, oo ah shirkadda ugu weyn ee Taiwan, ayaa sheegtay in diyaaradeeda aysan ka duuli doonin Iran ama Ciraaq sababo la xiriira xiisadaha ka jira gobolka, iyagoo sharraxaad ka bixinaya inay sii wadi doonaan inay la socdaan xaaladda isla markaana ay la qabsadaan marinnada sida waafaqsan.
Qantas-ka Australiya waxay kaloo sheegtay inay wax ka beddeshay jidadka duullimaadyada Bariga Dhexe si looga fogaado inay hawadu ka duusho Ciraaq iyo Iran.
Shirkadda diyaaradaha ee Emirates ayaa maanta joojisay duulimaadkeedii ka imaanayay Dubai ilaa Baqdaad iyo mid kale oo ka socdey Baqdaad ilaa Dubai, maanta duulimaadkeeduna sidoo kale baajiyay duulimaadyadii u socday Baghdad.
Maanta, Shirkadda Diyaaradaha Malaysia ayaa sheegtay inay ka fogaaneyso hawada Iran inay ka sii darto xiisadda militariga ee gobolka.
Shirkadda diyaaradaha ee Singapore, waxay duullimaadkeeda ka weecin doontaa hawada Iran.
Hawada Iran iyo Ciraaq ayaa muhiimad istiraatiiji ah u leh ganacsiga duullimaadyada diyaaradaha ee gobolka, iyo in la beddelo dariiqyada duulimaadka ay u badan tahay inay kordhiyaan qiimaha shidaalka.
Digniinaha wadamada aduunka
Dhinaca kale, Wasaaradda Arimaha Dibadda ee Hindiya ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay, “Marka loo eego xaalada sii kululaatay ee Ciraaq, Muwaadiniinta Hindi waxaa lagula talinayaa inay ka fogaadaan safarka aan loo baahnayn ee ay ku tagayaan Ciraaq illaa ogeysiin kale, iyo Muwaadiniinta Hindi ee ku sugan Ciraaq waxaa lagula talinayaa inay feejignaadaan oo ay ka fogaadaan dhaqdhaqaaqa Ciraaq dhexdeeda.
Bayaanka Hindiya wuxuu intaas ku daray in safaaradda Baqdaad iyo qunsuliyadda Erbil ee Gobolka Kurdistan ay wali shaqeynayaan.
Dhanka kale, Wasaaradda Arimaha Dibadda ee Philippine ayaa sheegtay in Manila uu amar ku bixiyay in si qasab ah looga daadgureeyo muwaadiniinteeda ku sugan Ciraaq, isagoo sharraxaya “waxaa la go’aamiyay in kor loo qaado heerka digniinta ee Ciraaq oo dhan heerka afaraad, kaasoo ku baaqaya in la guuro.”
Tallaabooyinkan ayaa yimid kadib markii ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ay gantaallo ku garaaceen laba saldhig oo ay ciidammada Mareykanka ee Ciraaq u isticmaaleen aargudasho dilkii Taliyihii Ciidamada Qudus Qassem Soleimani isbuucii lasoo dhaafay.
Xukuumadda oo lagu Ammaanay Bixinta Dhaqaalaha Doorashooyinka